Забур 149 CARS - Nnwom 149 ASCB
Monto dwom foforɔ mma Awurade,
monkamfo no wɔ ahotefoɔ asafo mu.
2Ma Israel ani nnye ne Yɛfoɔ mu.
Ma Sion mma ani nnye wɔn Ɔhene mu.
3Ma wɔmfa asa nkamfo ne din
na wɔmfa sankuo ne akasaeɛ nto dwom mma no.
4Na Awurade ani sɔ ne nkurɔfoɔ;
ɔde nkwagyeɛ kyɛ hyɛ ahobrɛasefoɔ.
5Momma ahotefoɔ nni ahurisie wɔ animuonyam yi mu;
na wɔnto ahosɛpɛ dwom wɔ wɔn mpa so.
6Onyankopɔn nkamfo nhyɛ wɔn anomu
na ɛnyɛ akofena anofanu wɔ wɔn nsam,
7sɛ wɔmfa ntɔ werɛ wɔ amanaman no so
ne dadeɛ mpɔkyerɛ ngu wɔn atitire,
9sɛ wɔmfa mmu atɛn sɛdeɛ wɔatwerɛ atia wɔn no.
Yei ne nʼahotefoɔ nyinaa animuonyam.
ASCB : Nnwom 149